Xiaomi Mi 8: Notch၊ Face ID၊ အတုဥာဏ်ရည်နှင့်ကွဲပြားသောဗားရှင်းသုံးမျိုး | Gadget သတင်း
Xiaomi ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ အာရှကုမ္ပဏီသည်ရှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပြီး Xiaomi Mi 8 ကို သုံး၍ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE နှင့် Xiaomi Mi 8 Explorer Edition တို့ဖြစ်သည်။ Xiaomi Mi 8 SE သည် Snapdragon 710 ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုဖြန့်ချီရန်တာဝန်ယူနေစဉ်၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Xiaomi Mi 8 သည်လအတန်ကြာမျှော်လင့်ထားသည့်မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ စစ်ထုတ်ထားသောကောလာဟလများမှာကွဲပြားခြားနားပြီးနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်ရှိသည်။ တင်ပြချက်မှာ မော်ဒယ်သုံးမျိုး၏တင်ဆက်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီကပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသည်။ Xiaomi Mi 8 SE ကိုလူသိများသည်။ သို့သော် Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုလည်းဖြန့်ချိမည်ဟုသံသယရှိစရာမရှိခဲ့ပါ။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်တက်ဖြစ်ကြသည်။ အကြီးဆုံးမော်ဒယ်များမှာသာမန် Xiaomi Mi 8 နှင့် Xiaomi Mi 8 Explorer Edition များဖြစ်သည် ၆.၂၁ လက်မဖန်သားပြင်များနှင့် SE မော်ဒယ်မှာထောင့်ဖြတ် ၅.၈၈ လက်မအထိရှိသည့် panel တစ်ခုနှင့်ကျန်ရှိနေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဤစမတ်ဖုန်းများ၌ Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ Snapdragon 6,21 ၏ထိပ်ဆုံးနှင့်အလယ်တန်းအကွာအဝေးတွင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပြိုင်ဘက်အသစ်များရှိလိမ့်မည်။ Snapdragon 710.
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ကိုဖန်သားပြင်ထဲ၌ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့မှန်ပါတယ် ၎င်းကိုပွင့်လင်းသောဗားရှင်း Explorer Edition တွင်သာရရှိနိုင်သည်; အခြားမော်ဒယ်လ် ၂ ခုမှာနှစ်ဆကင်မရာအာရုံခံ၏ဘေးတွင်ကျောဘက်၌စာဖတ်သူရှိလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ Xiaomi ကခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအိုင်ဖုန်း X လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံမှန် Notch ကိုထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ implanting ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုသည်၎င်း၏ရှေ့ကင်မရာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့က Face ID လို့ခေါ်တယ်။
ဤအတောအတွင်း operating system အစိတ်အပိုင်းအတွက်, Xiaomi ၏ထုံးစံအလွှာဖြစ်သော MIUI သည်ဇာတ်ကောင်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်လာမည် နှင့်ဗားရှင်း ၁၀ သို့ရောက်နိုင်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ကုမ္ပဏီသည် Artificial Intelligence ကိုအခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များပေါင်းစပ်ချင်သောအရာ - ဓာတ်ပုံအပိုင်းနှင့်၎င်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင် virtual assistant ကိုမြှင့်တင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ Xiaomi AI.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောပုံစံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဒါ့အပြင်သင်သတိရသင့်တယ် ကျွန်ုပ်တို့တွင် 8 GB RAM နှင့် 256 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်မော်ဒယ်လ်ရှိသည်။ ထိပ်ဆုံးဖြစ်သော Xiaomi Mi 8 Explorer Edition သည်ယွမ် ၃၆၉၉ (လက်ရှိငွေလဲနှုန်းဖြင့်ယူရို ၅၀၀) ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုလာမည့်ဇွန်လ ၅ ရက်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုသင်ပိုမိုနီးကပ်စွာသိလိုပါက၊ ရပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး အရာ၌ကျွန်တော်တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြည့်စုံစေ့စပ်လမ်းအတွက်သုံးမော်ဒယ်များအသီးအသီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ် Xiaomi က Mi 8.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Xiaomi Mi 8: Notch၊ Face ID၊ အတုဥာဏ်ရည်နှင့်ကွဲပြားသောဗားရှင်းသုံးမျိုးရှိသည်